Diyaarad sida meydka madaxweynihii hore Puntland oo timid garoonka diyaaradaha Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDiyaarad sida meydka madaxweynihii hore Puntland oo timid garoonka diyaaradaha Boosaaso
February 14, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Diyaarad sida meydka madaxweynihii hore Puntland oo timid garoonka diyaaradaha Boosaaso. [Xuquuqda Sawirka: Puntland Mirror]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Diyaarad sida meydka madaxweynihii hore ee Puntland Maxamuud Muuse Xirsi sidoo kale loo yaqaan “ Cade” ayaa soo gaartay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso, halkaas oo lagu aasi doono, sida masuuliyiin ku sugan garoonka ay u sheegeen Puntland Mirror.
Madaxweynihii hore ayaa loo sameyn doonaa aas qaran maanta oo Talaado ah.
Cade ayaa asbuucii lasoo dhaafay ku geeriyooday gudaha dalka Isutaga Imaaraatka Carabta.
February 13, 2017 Xildhibaan katirsanaa baarlamaanka cusub oo ku geeriyooday gudaha Muqdisho
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaaraysay is hortaaga socdaal ee lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed. “Falka ay dowladda federaalka Soomaaliya kula kacday madaxweynihii hore ee [...]